Soomaaliya oo kamid noqotay Dalalka lagu dilay Carruurtii ugu badneyd 2018-kii (Warbixin) – Idil News
Soomaaliya oo kamid noqotay Dalalka lagu dilay Carruurtii ugu badneyd 2018-kii (Warbixin)
Posted By: Jibril Qoobey February 19, 2019
LONDON (IDIL NEWS)-Warbixin ay Hay’adda Daryeelka Carruurta “Save the Children” ee dalka Britain soo saartay, ayaa lagu sheegay in ka badan 500,000 oo carruur ah laga yaabee inay ku geeriyoodeen Colaadihii ka dhacay Calaamka 5-tii sanno ee la soo dhaafay.
Cel-celiska Tirada carruurta ku geeriyootay colaadaha Goballadda Caalamka waxay ka badan tahay 100,000 ama inay maalin kasta 300 carruur ah ku geeriyoodaan dalalka ay colaadaha ka socdaan.
Warbixinta waxaa kaloo lagu xusay in ugu yaraan 500,000 carruur da’dooda ka hooseyso hal sanno ku geeriyoodaan colaadaha ka socda 10-ka waddan ee ay colaadaha halakeeyeen muddadii u dhexeysay 2013-kii ilaa 2017-kii
Warbixinta Hay’adda Daryeelka Carruurta “Save the Children” ayaa lagu sheegay in Liiska dalalka ay carruurta ugu badan ku geeriyoodeen colaadihii dhacay sannadkii 2017-kii kala yihiin: Afganistan, Yemen, South Sudan, Afrikada Dhexe, Kongada Dimuqraadiga, Syria, Iraq, Mali, Nigeria iyo Somalia.
Balse, Warbixinta laguma xusin tirade carruurta sida tooska ah loogu dilay dagaalladda ka dhacay dalalkaasi.
Save The Children waxay sheegtay in tirooyinkaasi ku jiraan carruurta iyo ilmaha yar ee laga yaabo inay u geeriyoodeen dhibaatooyinka ka soo gaaray dagaalladaasi, sida Macluul, cudduro dillaacay, burbur loo geystay Isbitaalladda ama dib-u-dhac ku yimaad gargaarka la soo diray.
Warbixinta waxaa lagu muujiyey in geerida carruurta sare u kacday ilaa 870,000 oo carruur, kuwaasi oo dhamaantooda ay ku jireen carruur ay da’dooda ka hooseysay 5 jir.
Dhinaca kale, Warbixinta Hay’adda Daryeelka Carruurta “Save the Children” waxay qiyaastay in ku-dhawaad 175,000 oo Dagaalyahano ama Askar lagu dilay colaadihii dhacay sannadihii 2013-kii ilaa 2017-kii.